Momba ny Better - Shandong Better Motor Co., Ltd.
Momba ny Better
Fampiasam-bola sy vokatra
Atrikasa sy fotodrafitrasa
Motors ho an'ny milina fanadiovana
Motors ho an'ny milina mpiasan-trano & ho an'ny zaridaina
Motors Fa Machine Aerodynamic
Motors For Applications Automotive
Motors ho an'ny milina herinaratra hafa
Hetsika tsara kokoa
Better Motor dia novolavolaina tamin'ny atrikasa Motor an'ny Shandong Fada Group Corporation, izay orinasam-panjakana. Shandong Fada Group Corporation dia niorina tamin'ny 1976, izay mpisava lalana ny mpanamboatra elektronika sy mpanadio vina any China.
Tamin'ny taona 1980, ny orinasa dia nampiditra teknikan'ny fanadiovan-drivotra lena sy maina avy amin'ny orinasa ELECTROSTAR avy any Alemana, nanafatra andalana famokarana andiana maotera avy any Etazonia, Japon ary Suisse. Io no orinasa voalohany tany Chine izay nahavita famokarana andiana maotera.
Rehefa avy nianatra sy nisintona avy amin'ny haitao mandroso sy ny fitaovana nandritra ny 10 taona mahery, dia nahomby tamin'ny famolavolana maotera andiany ho an'ny fanasan-tseranana avo lenta fa tsy nanafarana iray tamin'ny taona 1999. Tamin'ny volana aprily 2000, Longkou Better Motor Co., Ltd dia voasoratra soa aman-tsara izay natao manokana orinasa mpiray tsikombakomba. Tamin'ny volana septambra 2005, nanova anarana ho Shandong Better Motor Co., Ltd.
Telefaona:+86 535 8612516